Nyocha Ahịa | FXCC Blog
A pụghị ịmepụta ndekọ "omenala elu-ọ bụrụ na-eme ka ọ bụrụ" dịka nchekwa nke iframe plugin. A na-echekwa faịlụ omenala na ndekọ a n'ihi na WordPress na-ehichapụ folda nchekwa ngwa ngwa n'oge mmelite. Biko mepụta nchekwa ahụ aka.
A pụghị ịchekwa faịlụ "elu-iframe / js / ai_external.js". Biko lelee ikikere nke nchekwa js ma zọpụta ntọala ọzọ. A chọrọ faịlụ a maka mgbakọ ahụ mpụga! Ọ bụrụ na ị gaghị eji workaround mpụga biko mepụta faịlụ efu na aha i_external.js na js nchekwa nke ngwa mgbakwunye.